Professional Website တစ်ခု Build လုပ်မယ်ဆိုရင် : A Creative Digital Agency - Digital Dots
Professional Website တစ်ခု Build လုပ်မယ်ဆိုရင်
Website တစ်ခုကို Build လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် Coding လုံးဝမသိရင်တောင်မှ Website တစ်ခုကို အလွယ်တကူ Build လုပ်လို့ရနေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် မီးကျိုးမောင်းပျက် Website တစ်ခုပဲရမှာပါ။ တကယ် အသုံးတည့်ပြီး Impression ကောင်းတဲ့ Professional Website တစ်ခုရဖို့ဆိုရင်တော့ အဆင့်တွေ အများကြီးသွားရပါတယ်။
Google က သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ Google မှာပြုလုပ်တဲ့ ရှာဖွေမှုတွေရဲ့ 60% ကMobile ဖုန်းတွေကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့် Brand ရဲ့ Website ဟာ Mobile View မှာပါ Responsive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ နှစ်ခါပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။
2) Testimonial Content တွေဖန်တီးပါ
သင့် Brand ရဲ့ Online Presence ကို ပိုမိုခိုင်မာစေဖို့ သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး Customer တွေရဲ့ Review တွေကို Video ဒါမှမဟုတ် Slide ဖန်တီးပြီး Website မှာ ထည့်သွင်းပေးပါ။ ဒါမှလည်း သင့်လုပ်ငန်းကို လူတွေပိုယုံကြည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
3) Blog Page ထားပါ
Business Website ဖြစ်စေကာမူ Blog Page ကို ထားသင့်ပါတယ်။ Google က Blog မှာ Content တွေပုံမှန်တင်တာကို သဘောကျပါတယ်။ သင့် Website ကိုလည်း Active ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီ Blog က SEO အတွက်ပါ အထောက်အကူပေးပါတယ်။ Blog Post တွေကို Social Media မှာ ပြန်ရှဲခြင်းဖြင့်လည်း Website ဆီကို လူတွေပြန်ဆွဲခေါ်လို့ရပါတယ်။
4) Press Page ထားပါ
ဒါကလည်း Testimonial Content လိုပဲ သင့် Brand ကို ပိုပြီး ယုံကြည်မှုတိုးလာစေပါတယ်။ သင့် Brand အကြောင်းကို ဘယ် သတင်းမီဒီယာတွေက ဖော်ပြထားပြီးပြီလဲဆိုတာကို တင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
5) Social Media နဲ့ပြန်ချိတ်ပါ
Website အောက်ဘက်မှာ သင့် Brand ရဲ့ Facebook Page, YouTube Channel, Instagram စတာတွေကို ပြန်ထည့်ပေးပါ။
6) Live Chat လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့
သင့် Customer ရဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ Pain Point တွေကို ဖြေရှင်းပေးပြီး၊ သင့်ရဲ့ Sales ကိုတိုးစေမယ့် Live Chat ကို Website မှာထည့်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
7) နောက်ဆုံးတစ်ခုက Loading Time ပါ
47%သောလူတွေဟာ Webpage တစ်ခု Loading လုပ်တာကို ၂စက္ကန့်လောက်ပဲကြာစေချင်ပါတယ်။
40%ကတော့ ၃စက္ကန့်ထက်ပိုပြီး Loading ကြာနေတဲ့ Website တွေကို နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မကြည့်ကြတော့ပါဘူးတဲ့။ ဒီတော့ သင့် Website ရဲ့ Loading Time ဟာ တစ်စက္ကန့်ဆို တစ်စက္ကန့်အရေးပါနေပြီဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ Bounce Rate က ဒီရေအလား မြင့်တက်လာပါလိ့မ်မယ်။
Professional Website တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် Digital Dots ကနေပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခဲ့တာ အခုဆိုရင် Website ပေါင်း 400 ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းလည်း Professional ကျကျ Website တစ်ခုကို Build လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Blog ရေးတဲ့အခါ မှားလေ့ရှိတဲ့ အမှား ၆ခု
Social Media ပေါ်မှာ Organic Reach များစေမယ့် နည်းလမ်း (၅)ချက်
Facebook မှာ ဘယ်လိုမျိုး Story တွေဖန်တီးနေကြလဲ?
ဓါတ်ပုံ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သော website များ
Logo ကဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ?
+95 1 700 830, +9598989 460 45, +9598989 460 15, +959425 033 695 hello@www.digitaldots.com.mm